Politikan'ny fanjakana :: Homena lanja ny tontolon’ny kolontsaina • AoRaha
Politikan’ny fanjakana Homena lanja ny tontolon’ny kolontsaina
Anisan’ny misongadina ao anatin’ny Pôlitika ankapoben’ny fanjakana (PGE) ny fanomezan-danja ny kolontsaina. Endrika maro no hahafahana mana-tanteraka izany, raha ny voalaza ao anatin’ity « PGE» ity ary misy ny laharam-pahamehana amin’izy ireo.
Anisan’izany ny fananganana mozea, fanarenana ireo harem-bakoka isan-karazany, izay sady mirakitra tantara ihany koa, toy ny fanarenana ny Lapan’i Manjakamiadana, izay kendrena ho vita alohan’ny 26 jona 2020.
Tanjona amin’io Pôlitika ankapoben’ny fanjakana eo amin’ny tontolon’ny kolontsaina io ny hanomezana lanja sy hasina azy indray sy ny fomba amam-panao malagasy. Hapetraka sy hasongadina ny mampiavaka ny kolontsaina malagasy amin’ny toerana tokony hisy azy. Ho fanatanterahana izany, hisy ny fananganana ny Akademiam-pirenena ho an’ny zavakanto sy ny kolontsaina.
Talenta sy famoronana “Gasinbox”, milina malagasy voalohany mitendry valiha
Fiantsoana fifaninanana Entanina haneho ireo Angano anaty sary fanehoana ireo tanora
Fampisehoana takariva Hifampizara sehatra amina mpitendry gitara tanora i Tselonina
Fifaninanana vakiteny Omena vahana ireo kilonga tia boky
IFM Analakely :: Hanokatra ny fetin’ny horonantsary ny sanganasan’i Patricia Mazuy